Asphalt Street Storm Racing Android အတွက်ဒေါင်းလုပ် APK
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ကတ္တရာလမ်း, မုန်တိုင်းပြိုင်ပွဲ
ကတ္တရာလမ်း, မုန်တိုင်းပြိုင်ပွဲ APK ကို
5 /5"ငါသည့်ပန်းရောင်-စလစ်ပြေးပြိုင်ပွဲ၌ငါ့ပထမဦးဆုံးကားကိုအနိုင်ရခဲ့! wow ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအလုအယက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဒီဂိမ်းကိုချစ်! "
5 /5"Excellent ကဆွဲပြိုင်ကားဂိမ်း! ဒါဟာအကြီးအကြည့်များနှင့်ရေတိုလူမျိုးပျော်စရာနှင့်အစွဲလမ်းများမှာ! ငါကလူတိုင်းကအကြံပြုလိုပါတယ်။ "
5 /5"ငါပစ်လွှတ်စက်ပြင်မေတ္တာရှင်နေပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများသည်အခြားဂိမ်းမတူဘဲကျွမ်းကျင်မှုအားဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ကြသည်။ ကိုက်ညီဖို့မယုံနိုင်စရာဂရပ်ဖစ်များနှင့်ဂိမ်း! "
သင်အကြိုက်ဆုံးပြိုင်ပွဲစက်၏ဘီးနောက်ကွယ်မှကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းမြို့ကြီးများကိုဖြတ်ပြီး drag ပြိုင်ပွဲ!
မြန်နှုန်းမြင့်ဆွဲပြိုင်ပွဲများတွင်ကမ္ဘာ့အများဆုံးအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေနှင့်လူကြိုက်များမြို့ကြီးများကိုဖြတ်ပြီးသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးတာဘို-တရားစွဲဆိုစူပါမောင်း။ သည်လောင်းကြေးမြှင့်သင့်ရဲ့ကြွက်သားကိုပြသ, ပြီးတော့မိုးရွာရွာ, နှင်းမုန်တိုင်းသို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့ညှိုးနွမ်းစေတာအပူအားဖြင့်သင်တို့၏လမ်းတပ်များ, အံ့သြဖွယ် 3D လမ်းများပေါ်တွင်သင်၏ပြိုင်ဖက် '' ကားများအနိုင်ရပန်းရောင်စာရွက်များအလောင်းအစား။
အစစ်အမှန်အမြန် multiplayer ပျော်စရာရှာဖွေနေပါသလား ဘယ်လို 1 PvP အခမဲ့-for-အားလုံးလူမျိုး vs. တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ3ကော? ပြိုင်ပွဲအဆိုပါခက်, အောင်ပွဲ သာ. !
•သင့်အိပ်မက်ရဲ့ CAR စုဆောင်းခြင်း
ဂန္ကြွက်သားကားများအနေဖြင့်အသစ်သောတာဘိုစူပါအထိ, စုဆောင်း customize နှင့်သင်ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲ Full-ပါဝါအော်တိုသို့မဟုတ်သင်မောင်းထုတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးကိုမြန်နှုန်းစက်တွေ။ အားလုံးလိုင်စင်ရ! သင့်မော်တာပြေးရပါသလား?
သငျသညျအသီးအသီးလမ်းပေါ်ပြေးအပေါ်သေးငယ်တဲ့အလောင်းအစားသို့မဟုတ်ပန်းရောင်စာရွက်များအလောင်းအစားရှေ့၌သင်တို့ပြိုင်ဘက်လေ့လာဖို့ရန်လိုအပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ဤသူသည်သင်တို့အစဉ်အဆက်ကိုမြင်ရပါတယ်ဆွဲပြိုင်ကားများ၏အများဆုံးပျော်စရာများနှင့်ပြင်းထန်သောလေးပုံတစ်ပုံ-မိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကစားနည်း Single-player ကိုများနှင့် multiplayer PvP တိုက်ပွဲများအတွင်းရရှိနိုင်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းမောင်းနှင်မှုပြိုင်ဘက်ကိုစိန်ခေါ်၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ပျော်စရာအဘို့အစာရှောင်ခြင်း multiplayer လူမျိုးမှ Single-player ကိုအနေဖြင့်လျင်မြန်စွာပြောင်းကုန်ပြီ! တစ်ဦးတည်းသာအနိုင်ရနိုင်မည့် real-time PvP တိုက်ပွဲများအတွက်3အခြားကစားသမား vs. အေးမြလူမျိုးအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ယူ. , အခြားသူများအားရှုံးနိမ့်ထွက်မီးရှို့မည်။
တစ်ဦးဆွဲပြိုင်ပွဲတစ်ဦး Blizzard လိုပဲမိုးသက်မုန်တိုင်းသစ်တစ်ခုလှည့်ကွက်ပစ်သို့မဟုတ်လမ်းပေါ်မှာအပူကိုမီးရှို့ကြလိမ့်မည်သည့်အခါသင်သိဘူး။ တစ်ခုချင်းစီကိုရာသီဥတု Simulator ကိုသင်နှင့်သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ပြိုင်ကားသမား "ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးကိုမှန်ကန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ချုပ်ကိုင်ဆုံးရှုံးနှင့် finish ကိုလိုင်းကျော်သင့်ရဲ့အော်တို nitro ဘူး!
သငျသညျမြန်နှုန်းများအတွက်ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းမြို့ကြီးများ၏3အတွက် nitro သေတ္တာကလေး pop ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာထိပ်အရည်အသွေး 3D HD ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာအားဖြင့်အာရုံခံရဖို့မကြိုးစားပါ: နယူးယောက်, ပဲရစ်မြို့နှင့်ဟောင်ကောင်။
•သင့် AUTO UNIQUE စေ!
အသစ်တစ်ခုကိုကြည့်ဘို့ Going? အချို့သောမြန်ဆန်ကြွက်သားအဆင့်မြှင့်လိုအပ်ပါသလား? သို့ပြုလျှင်သင်၏ torque, nitro သို့မဟုတ်အင်ဂျင်ပါဝါကို customize နှင့်အာဏာအထိမြောက်မြားစွာ options များမှတစ်ဆင့် browse အခမဲ့ခံစားရသည်။ သင့်ရဲ့ပြိုင်ကားသမားပျော်စရာ decals နှင့်အတူစစ်မှန်သောစတိုင်အပြိုင်နှင့်တာဘိုအမြန်နှုန်း, မော်တာ Supercharger, nitro နှင့်ပိုပြီးနှင့်သင်၏ multiplayer စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးပြပါ။
အေး 3D ပုံရိပ်ယောင်များနှင့်သဘာဝအလင်း Simulator ကိုအပေါ်သင်၏မျက်စိစားသောက်။ console-Level ကို HD graphics ကိုကျွန်တော်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုတစ်ဦးဂန္အမှတ်အသားများမှာ!
http://gmlft.co/website_EN မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာရှိတဦးက site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
http://gmlft.co/central မှာ new blog ထုတ်စစ်ဆေး
Facebook မှာ: http://gmlft.co/Asphalt_Streetstorm_FB
Instagram ကို: http://gmlft.co/Asphalt_Streetstorm_IG
YouTube ကို: http://gmlft.co/Asphalt_Streetstorm_YT
ဒီ app ကိုသင် app ကိုအတွင်းက virtual ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်ခွင့်ပြုနှင့်တစ်ဦး Third-party site ကိုမှသင်က redirect စေခြင်းငှါ Third-party ကြော်ငြာများပါဝင်နိုင်သည်။
end-User License Agreement ကို: http://www.gameloft.com/en/eula
ကျနော်တို့သင်ဤအသစ်အခမဲ့နှင့်လူကြိုက်များပြိုင်ကားဂိမ်းထဲမှာပျော်စရာရှိသည်တာပေါ့အလောင်းအစား! သင့်ရဲ့မောင်းနှင်မှုပြိုင်ဘက်ထိပ်ဆုံးမှအစာရှောင်မောင်း, အေးမြကြည့်ရှုသင့်ကားကိုစိတ်ကြိုက်နှင့်သင်သည်သင်၏အင်ဂျင်ရဲ့လိမ်အားစမ်းသပ်ရန်အဖြစ်အကောင်းဆုံး HD ကို 3D ဂရပ်ဖစ်ပျော်မွေ့, Real-time PvP အတွက်အလောင်းအစားစူပါသို့မဟုတ်ဂန္အော်တိုနှင့်ပြိုင်ပွဲ။ ထိပ် Nitro-powered ဆွဲပြိုင်ကားနှင့်သင်၏အတွင်းစိတ်မြန်နှုန်းနတ်ဆိုးအခမဲ့ဖြစ်သည်။ အားလုံး HD မှာ, လူကြိုက်များမြန်နှုန်းမြင့်စူပါ, အစာရှောင်လူမျိုးနှင့် NOS burnouts နှင့်အတူပါဆုံးပျော်စရာပျော်ရွှင်ခံစားပါ!
ယခုအကောင်းဆုံး All-သစ်ကိုဆွဲပြိုင်ကားဂိမ်း Download! အစာရှောင်မောင်း။ အေးမြသောကြည့်ပါ။ အားလုံးအခမဲ့!
အမျိုးမျိုးသောဂိမ်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှု, ပိုမိုကောင်းမွန်ရေးနှင့် bug ကိုပြင်ဆင်ခြင်းများ။
51.84 ကို MB
ကတ္တရာ Xtreme: ...
Gangstar ဂတ်စ် - ...